रातो केरा : नसुनेकाे हुनसक्छ ? जसले प्रेसर, क्यान्सर, मुटु रोगबाट बचाउँछ | Investopaper
रातो केरा : नसुनेकाे हुनसक्छ ? जसले प्रेसर, क्यान्सर, मुटु रोगबाट बचाउँछ
काठमाडौं । हामीले प्रायः सबै पहेंलो र हरीयो केरा देखेका वा खाएका छौँ । तर के तपाईंले कहिल्यै रातो केरा खानु भएको छ ? अझ भनौँ न देख्नुभएको छ ? रातो रंगको केरा अष्ट्रेलियामा पाइन्छ ।अष्ट्रेलिया बाहेक यो वेस्टइन्डीज, मेक्सिको र अमेरिकाको केही भागहरूमा उत्पादन गरिन्छ ।
केरा एक फल हो जुन विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध हुन्छ । केरा मन नपर्ने मान्छेहरु सायदै होलान । यद्यपि रातो केरा नेपामला खास लोकप्रिय छैन । तर रातो केरामा पोषक तत्वको उच्च मात्रामा पाइन्छ ।
१) मिर्गौलाको पथ्थरी हुनबाट बचाउँछ :
२) तौल कम गर्न सहयोगी :
३) शरीरमा रगतको मात्राको लागी :
४) उर्जाको राम्रो माध्यम :
५) मुटु सम्बन्धी रोगका लागि :
← समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्ति आवश्यक– मन्त्री रायमाझी
नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापनाको तयारी हुँदै →